Iinkqubo ezili-10 eziPhambili eziFundisiweyo zeFD kunye neZicelo zoLwazi 2022
Oktobha 19, 2021 Eze uThadayo
Iinkqubo ezili-10 eziPhambili eziFundisiweyo zeFD kunye neZicelo zoQhagamshelo
Ukulandela isidanga se-PhD kuyabiza, yiya kuluhlu lwethu lweenkqubo zeFD ezixhaswe ngokupheleleyo kwaye uthumele izicelo. Unokuba nethamsanqa kwaye ufumane enye enokugubungela yonke imfundo yakho yobugqirha.
Umfundi oye wahlangabezana nemfuno yokugqibezela inkqubo yobugqirha unikwa isidanga se-PhD kwaye, ngoku, lelona nqanaba liphezulu lokufunda. Ukulandela isidanga se-PhD, kuya kufuneka ukuba uyigqibe i-bachelor's, emva koko isidanga senkosi ekufuneka sinxulumene nale nkqubo yobugqirha uyifunayo. Inkqubo yobugqirha yemfundo enzulu ngakumbi ngesihloko esithile.
Ke ngoko, kuya kubakho uphando oluninzi kunye nomsebenzi wasendle, enyanisweni, yiyo yonke le nto uya kube uyenza njengomfundi wobugqirha. Inqanaba elonwabisayo lokufunda kwaye kulapho ufumana khona ukuphuhlisa amandla akho ngokupheleleyo. Isoftware, i-antivirus, amayeza, itekhnoloji, ubuchwephesha, okanye nantoni na, osoloko ufuna ukuyakha apho ufumana khona ukwakha, ukuyila nokuphuhlisa.
Uya kusebenza kunye nengqondo, ebandakanya abanye abafundi abaphumeleleyo kunye noonjingalwazi abaziwayo abaye benza impumelelo okanye igalelo ngokubhekisele kwicandelo lakho lokufunda. Nangona kunjalo, injongo yophando lwakho kufuneka ibonise igalelo elifanelekileyo kuluntu nakwihlabathi liphela.
Inkqubo ye-PhD inomdla, unikwa zonke izixhobo nayo nayiphi na enye into onokuyidinga ukuze ugqwese emsebenzini wakho. Nangona kunjalo, icala elisezantsi lelokuba kubiza kakhulu kwaye esi sizathu sinye senze abafundi abaninzi ukuba barhoxe ekulandeleni isidanga sobugqirha.
Kukumalunga noku ukuba sishicilele eli nqaku kwiinkqubo zeFD ezixhaswe ngokupheleleyo ukuze ungalahli amaphupha akho. Ezi nkqubo ziza ngendlela yokufunda, iibhasari, ubudlelwane kunye nezinye iindlela zoncedo lwezezimali kodwa zonke zijolise kwinto enye. Ngokusebenzisa amathuba ezemali ezi nkqubo zinikezelayo, ungaya kwizifundo zakho ze-PhD ngaphandle kwemicimbi yezemali.
Ngapha koko, yile nto kanye ekujolise kuyo izibonelelo zemali. Zisekwe ukunceda abafundi abafuna ukwenza isidanga sobugqirha kodwa abakwazi ukuphatha umthwalo wemali. Iinkqubo ezixhaswa ngemali ngokupheleleyo ziya ekuhlawuleni yonke imali yokufunda, indawo yokuhlala, iindleko zophando, kwaye abanye bade baqhubeke nokubanika izibonelelo okanye izibonelelo zenyanga.
Ezi nkqubo zeFD zixhaswa ngemali zigubungela abafundi bamanye amazwe kunye nabasekhaya, ukuba nje wenza iimfuno zokwamkelwa kwaye ke ukulungela ukufundela, uyakufumana isibonelelo. Oku kuvumela abafundi ukuba bazibhaptize ngokupheleleyo kuphando nakwimfundo yabo ngaphandle kokucinga ngayo nayiphi na imicimbi yezemali.
1 Zithini iiNkqubo zeFD eziXhaswe ngokupheleleyo?
2 Izidingo zokufaka isicelo kwiiNkqubo zeFD eziFundisiweyo
3 IiNkqubo zeFD eziFundisiweyo ngokupheleleyo kunye neZicelo zoQhagamshelo
3.1 1. IYunivesithi yaseCalifornia Irvine (UCI) PhD kwiJamani
3.2 2. Isikolo sePardee RAND
3.3 3. Uncedo loBambiswano lweGRS yeYunivesithi yaseBoston
3.4 4. IYunivesithi yaseArizona, iSebe leSpanish nesiPhuthukezi
3.5 5. PhD kwi-Biological Sciences kwiMpilo kaRhulumente kwiYunivesithi yaseHarvard
3.6 6. INkqubo yeMIT Sloan PhD
3.7 7. I-PhD yeSikolo sakwaSmith kubuNjineli beMichiza
3.8 8. PhD kwiNzululwazi yeKhompyutha kwiYunivesithi yaseGeorgetown
3.9 9. PhD kwi-Psychology yeNgcebiso kwiYunivesithi yaseWisconsin-Madison
3.10 10. PhD kwi-Economics kwiYunivesithi yaseEmory
Zithini iiNkqubo zeFD eziXhaswe ngokupheleleyo?
Iinkqubo zeFD ezifumana inkxaso-mali ngokupheleleyo ngamathuba oncedo lwezezimali anje ngezifundo ezifumana inkxaso-mali ngokupheleleyo, abafo, kunye neebhasari ezibonelela ngokuyekisa izifundo kunye nokubonelela ngesibonelelo sonyaka okanye senyanga okanye isibonelelo. Abanye baya kugubungela i-inshurensi yezempilo kunye nezinye izibonelelo. Nangona kunjalo, ukufumana ukungena kwiinkqubo ezinje kukhuphiswano olukhulu kwaye inkqubo ethile ithatha ixesha elininzi ukuyigqiba.
Izidingo zokufaka isicelo kwiiNkqubo zeFD eziFundisiweyo
Izidingo zokufaka izicelo ze-PhD ezifumana inkxaso-mali ngokupheleleyo ziyahluka ngokwamaziko kunye nombutho onikezela ngesibonelelo kodwa eyona mfuno iphambili kukuba kufuneka ungeniswe kwiziko eliphakamileyo eligunyazisiweyo ukuze wenze inkqubo yesidanga sobugqirha.
Ukuba nomsebenzi ogqwesileyo kwizifundo kuya kwandisa amathuba akho okuba wamkelwe kwenye yeenkqubo. Amaxwebhu afana nokuqala kwakhona okanye ii-CV, izincoko, iingxelo zenjongo, kunye neeleta zengcebiso ziya kuthathelwa ingqalelo xa ucinga ngokubonelela ngenkqubo yeFD exhaswa ngokupheleleyo.
IiNkqubo zeFD eziFundisiweyo ngokupheleleyo kunye neZicelo zoQhagamshelo
Iinkqubo ezixhaswa ngemali ngokupheleleyo eziqulunqwe apha zigubungela iinkalo ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, ubunjineli, ubuhlengikazi, isayikholoji, isayensi yekhompyuter, kunye nezinye ezininzi. Izibonelelo zibonelelwe ukusuka kwi- $ 2,000 ukuya ngaphezulu kwe- $ 60,000, amakhonkco ezicelo ezithile abonelelwe ngokulinganayo ukuba ufake isicelo kwangoko.
IYunivesithi yaseCalifornia Irvine (UCI) PhD kwiJamani
Isikolo sePardee RAND
Uncedo lwe-GRS yeYunivesithi yaseBoston
IYunivesithi yaseArizona, iSebe leSpanish nePhuthukezi
I-PhD kwiSayensi yezebhayoloji kwiMpilo kaRhulumente kwiYunivesithi yaseHarvard
Inkqubo ye-MIT Sloan PhD
I-PhD yeSikolo sikaSmith kubuNjineli beMichiza
I-PhD kwiSayensi yeKhompyutha kwiYunivesithi yaseGeorgetown
I-PhD yoLuleko ngeNzululwazi kwiYunivesithi yaseWisconsin-Madison
PhD kwi-Economics kwiYunivesithi yaseEmory
1. IYunivesithi yaseCalifornia Irvine (UCI) PhD kwiJamani
I-UCI sesinye sezona zikolo zibalaseleyo eCarlifonia nase-United States xa iyonke, ezinye zeenkqubo zayo zikwinqanaba eliphambili kwihlabathi liphela. Eliziko libonelela ngeendlela ezahlukeneyo zemfundo kwizidanga zokuqala kunye neenkqubo zesidanga sokuqala kubandakanya ne-PhD yesiJamani. Le nkqubo ye-PhD inikezelwa yi-UCI yaseYurophu yeziFundo zoLwimi phantsi kweSikolo soLuntu.
Abafundi abanomdla wokulandela i-PhD ngesiJamani banokwenza njalo kwi-UCI kwaye bamkelwe ngenkxaso-mali yobudlelane. Bonke abafundi be-PhD bamkelwe kule nkqubo baya kufumana inkxaso-mali yeminyaka emihlanu kwiSikolo soLuntu equka indibaniselwano yobudlelwane, ukuncedisa ukufundisa, kunye nenkxaso yokuncedisa kuphando. Iya kubandakanya iifizi zikarhulumente, i-inshurensi yezempilo, kunye nezifundo ezingahlaliyo.
Inkqubo inomhla obekiweyo kunye nezinye iimfuno zesicelo onokuzifumana kwikhonkco elingezantsi. Eli lithuba ongafanele ulichithe, yenze ngalo ngoku.
2. Isikolo sePardee RAND
Isikolo sePardee RAND Graduate siseSanta Monica, eCalifornia, kwaye sibonelela ngenkqubo ephezulu yeFD exhaswa ngokupheleleyo. Esi sikolo siphumelele ukubonelela ngamathuba okuncedisa ngemali kuwo wonke umfundi we-PhD oza kuyo nayiphi na inkqubo kwaye iyafumaneka ngokulinganayo kubafundi bamanye amazwe.
Kunyaka wokuqala, abafundi bafumana isifundiswa esigcweleyo kwaye bafumana ubudlelane bophando lwabo ngokwenza uphando kwiRAND. Kunyaka wesibini, abafundi banikwa isibonelelo sokufunda ngenxalenye yokuhlawulela izifundo esele zisebenza, basebenza ngenani elonyukayo leentsuku zomsebenzi kwaye bafumana ubudlelwane obukhulu bophando.
Ke ekugqibeleni, kunyaka wabo we-3-5, imali yokufunda iyacuthwa kwaye ubudlelwane babafundi bonyuka kunye neentsuku zoqeqesho emsebenzini. Iindleko ezipheleleyo zeinshurensi yezempilo yabafundi ikwagutyungelwe.
3. Uncedo loBambiswano lweGRS yeYunivesithi yaseBoston
Isikolo seGraduation soBugcisa kunye nezeNzululwazi (GRS) kwiYunivesithi yaseBoston sinikezela ngeminyaka emi-5 yokunceda ngokupheleleyo kubo bonke abafundi abasandula ukwamkelwa be-PhD. Uncedo lunokuba ludibaniso lwentsebenzo engekho kwinkonzo (enje ngeDean's Fsociation), ubudlelwane bokufundisa, okanye ubudlelwane bobugqirha, kuxhomekeke kwisebe lokwamkelwa.
Njengengxenye yebhaso lobudlelane, iYunivesithi yaseBoston iya kuhlawula iindleko zokuthatha kwakho inxaxheba kwisicwangciso se-Inshurensi yezeMpilo yabafundi esisiseko esixabisa i-3,054 ye- $. Olu ncedo lokudibana yenye yeenkqubo zeFD ezifumana inkxaso-mali ezisebenza kubo bonke abafundi abangena kwi-GRS kwaye ikwanabafundi bamazwe aphesheya.
4. IYunivesithi yaseArizona, iSebe leSpanish nesiPhuthukezi
IYunivesithi yaseArizona ikwiTucson, eArizona, kwaye ngeKholeji yayo yoLuntu ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuxhasa ngemali abafundi be-PhD kunye ne-Master kwiSebe leSpanish nezoLuntu. Abancedisi abaphumeleleyo kwiSebe leSpanish nelePhuthukezi banikezela ngamathuba okufundisa ngokungesosigxina kunye nokukhutshwa kwezifundo kwabo bangengabo abahlali.
Umthwalo oqhelekileyo wokufundisa ziikhosi ezintathu ukuya kwezine ngonyaka, kunye nokufundiswa okubekwe esweni kwezifundo zesidanga sokuqala kwiSpanish nesiPhuthukezi. Njengomfundi we-PhD osebenza kulonyulo olunxulumene nesidanga, uya kufumana isibonelelo sonyaka se- $ 8,513 sokufundisa iklasi enye okanye i- $ 17,025 yokufundisa iiklasi ezimbini.
I-Waition ye-Graduate Tuition Waivers (i-RC Waivers) inokuhlawula konke okanye inxenye yeendleko zokufunda kunye nokubonelela ngamanye amathuba obudlelane. Olunye ubudlelwane kunye noncedo lwabafundi be-PhD lubandakanya uRuth Lee Kennedy Ubambiswano, uMncedisi oPhumelele eAlcala de Henares, eSpain, kuLwimi lwangaphandle, nakwiNdawo yeziFundo (i-FLAS) yokuBambisana, ukuBambisana kweFlas yeHlabathi, uKaren L. Smith Ubambiswano, Isibonelelo soPhando ngeTinker yeHlabathi, kunye ISebe leSpanish nePortugal Grant Grant.
5. PhD kwi-Biological Sciences kwiMpilo kaRhulumente kwiYunivesithi yaseHarvard
IHarvard sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwihlabathi kwaye ibonelela ngeenkqubo zeFD ezifumana inkxaso-mali ngokupheleleyo kubafundi beNzululwazi yezebhayoloji kwiMpilo kaRhulumente. Lisebe eliphantsi kweHarvard TH Chan School yezeMpilo kaRhulumente elungiselela abafundi ukuba benze umsebenzi ophakamileyo wokufunda okanye wophando.
Bonke abafundi, kubandakanywa nabafundi bamazwe ngamazwe, abamkelwe kwi-PhD kwi-Biological Sciences kwinkqubo yezeMpilo yoLuntu baqinisekiswa ngenkxaso epheleleyo iminyaka emihlanu. Inkxaso ibandakanya umvuzo, izifundo, kunye ne-inshurensi yezempilo, njengoko zigcina inkqubela entle.
Ukuba ufaka isicelo kule nkqubo, kuya kufuneka ube nomnqweno onamandla kunye namandla okulandela ulwazi lwenzululwazi ngamandla ukuze uthathelwe ingqalelo ukwamkelwa. Ubuncinci beemfuno zibandakanya isidanga sebhatshela kunye nokulungiselela izidanga kwisayensi. Olu ncedo lwezemali yenye yeenkqubo zePhD ezixhaswa ngemali ngokupheleleyo ezifunwa ngumfundi wamazwe ngamazwe, xhuma kweli thuba kwaye ufumane isidanga kwelona ziko libalaseleyo lehlabathi.
6. INkqubo yeMIT Sloan PhD
IMassachusetts Institute of Technology ibonelela ngeenkqubo zeshishini kunye nolawulo kuwo onke amanqanaba okufunda ngeMIT Sloan School of Management. I-PhD kwishishini kunye neenkqubo zolawulo zikwanikezelwa ngokusebenzisa eli candelo apho abafundi abakule nkqubo babandakanyeka kuphando olungqongqo, olusekwe ekuqeqesheni ukufumana izakhono zobukrelekrele ezibalaseleyo kwaye babe ziinkokheli kumacandelo abo ophando.
Ukuba kunokwenzeka ukuba ube nokugqwesa kwizifundo kule nkqubo ungafumana ipakeji yenkxaso mali egubungela izifundo, i-inshurensi yezonyango kunye nomvuzo. Ikhompyuter entsha (ebonelelwe ekuqaleni konyaka wokuqala nowesine) kunye nenkomfa yokuhamba okanye uhlahlo-lwabiwo mali lophando lwe- $ 4,500 zibonelelwa ngokulinganayo. Inkqubo yiminyaka emihlanu kwaye inkxaso-mali iya kubandakanya lonke ixesha.
Abafundi bafumana unyaka wokufunda opheleleyo kunye nokuhlawulwa kwe- $ 3,918 yenyanga efikelela kwi- $ 47,016 iyonke ngonyaka kwisithuba seminyaka emi-5. Abafundi bakwafumana nemigaqo ye-12 yobudlelwane ngexesha lemigaqo yabo ye-15, i-inshurensi yezonyango ye- $ 3,269 ngonyaka ikwagutyungelwe. Le yenye yeenkqubo zeFD ezifumana inkxaso-mali ngokupheleleyo kwishishini ekufuneka uliphonononge ngokunzulu, iMIT yenye yezona zinto zibalaseleyo emhlabeni, eli lithuba.
7. I-PhD yeSikolo sikaSmith kubuNjineli beMichiza
Isikolo iSmith saziwa ngokupheleleyo njengeRobert Frederick Smith School of Chemical and Biomolecular Engineering. Sisikolo esiphantsi kweCornell Engineering, icandelo lobunjineli kwiYunivesithi yaseCornell- esinye sezikolo ezidumileyo zeIvy League. Unokulandela i-PhD kubunjineli bemichiza esikolweni ukuba uyahlangabezana neemfuno zokwamkelwa ukuze wamkelwe kwaye ufumane ukufikelela ukuze ufumane inkxaso-mali epheleleyo.
Inkqubo yenzelwe ukulungiselela abafundi amakhondo emfundo nakuphando, igqityiwe kwiminyaka emine ukuya kwemihlanu. Ngelixa ulandela le nkqubo, awuzukuba naxhala malunga nemali njengoko uza kunikwa uncedo olukhulu lwezezimali. Olu ncedo luya kuqhubeka nokugubungela konke ukufundela, ukubambelela, kunye neinshurensi yezempilo, nokuba kubudlelane, uncediso lophando, okanye uncediso lokufundisa.
Abafundi baya kufumana umvuzo opheleleyo kwiinyanga ezilithoba kunye nenkxaso eyongezelelweyo yehlobo.
8. PhD kwiNzululwazi yeKhompyutha kwiYunivesithi yaseGeorgetown
I-PhD kwisayensi yekhompyuter kwiYunivesithi yaseGeorgetown ibonelela ngeyona nkqubo yeFD exhaswa ngokupheleleyo. ISebe leNzululwazi yeKhompyuter libonelela ngoncedo olusekwe kumgangatho ofanelekileyo wokunikezelwa kwemali kubafundi be-PhD kwiminyaka emihlanu yokuqala yokufunda ngezifundo kunye noncedo.
Uncedo lwezezimali lugubungela ukubambelela, iindleko zokufunda, kunye neinshurensi yezempilo. Jonga umhla wokugqibela wesicelo kunye nezinye iimfuno ezingezantsi. Ukuba ufuna ukuqhubela phambili imfundo yakho yekhompyuter ukuya kwinqanaba le-PhD, le yenye yeenkqubo zePhD ezixhaswa ngemali ngokupheleleyo kwisayensi yekhompyuter ekufuneka uyiphonononge.
9. PhD kwi-Psychology yeNgcebiso kwiYunivesithi yaseWisconsin-Madison
Abafundi ababhalise kwinkqubo ye-PhD kwi-Counselling Psychology kwiYunivesithi yaseWisconsin-Madison uqinisekisiwe ngenkxaso yemali. Inkxaso-mali iqinisekisiwe ingekho ngaphantsi kwenqanaba lama-50% ngalo lonke ixesha lesiqinisekiso, ukuba ngaba abafundi bagcina intsebenzo esemagqabini.
Ngaphantsi kwemiqathango yesiqinisekiso, imithombo eyahlukeneyo yenkxaso-mali inokubonelela ngenkxaso kubafundi kubandakanya ubudlelwane, ukufundisa ngokuncedisa, ukuncedisa iprojekthi, ukuncedisa uphando, okanye ukufundisa ukufundisa. Ezi nkxaso zinokuhlawulela imali yokufunda, ukuhlawula i-stipend, kunye ne-inshurensi yezempilo. Abafundi bakwakhuthazwa ukuba baphonononge amathuba angaphandle enkxaso-mali. Le yenye yeenkqubo zePhD ezixhaswa ngemali ngokupheleleyo ekufuneka uziphonononge.
10. PhD kwi-Economics kwiYunivesithi yaseEmory
Ngokwewebhusayithi yeYunivesithi yaseEmory, abafundi abathatha inxaxheba kwinkqubo ye-PhD yezoqoqosho bahlala befumana inkxaso epheleleyo, nangona kungaqinisekiswanga. Abafundi bafumana i-31,775 yeedola ngonyaka iminyaka emihlanu, kunye nesibonelelo sokufunda esipheleleyo se- $ 65,700 ngonyaka. Inkxaso-mali egubungela i-100% yeendleko zeinshurensi yezempilo yomfundi ibandakanyiwe kwinkxaso mali yabafundi abamkelweyo.
Akukho zimfuno zomsebenzi zinxulumene nokuhlawulwa kwabafundi kunyaka wokuqala.
Ezi zezona nkqubo zeFD zixhaswa ngokupheleleyo kwaye kufuneka uzivavanye kwaye uzifake izicelo kwaye kuba uninzi lwazo lwamkela abafundi bamanye amazwe lwenza ukuba ithuba lisasazeke kubantu abaninzi kangangoko kunokwenzeka. Ezi nkqubo zikhuphisana kakhulu ukuba ungene, qinisekisa ukuba unesiphumo esigqwesileyo semfundo sokufaka isicelo kwiinkqubo.
Ngaba uninzi lweenkqubo ze-PhD zixhaswa ngokupheleleyo?
Uninzi lweenkqubo ze-PhD zixhaswa ngokupheleleyo kwaye oku kungenxa yokuba usebenza kuphando oluya kuthi luthande isikolo, uluntu kunye nehlabathi ngokubanzi. Ke ngoko, unikwa izixhobo ezaneleyo ukuvumela uphando lwakho.
Ungaphumelela njani kwiSiseko seTrudeau Scholarship eCanada-PhD
Iindlela ezi-5 eziMangalisayo zokufumana i-PhD e-Australia ngeScholarship
Apho ungathenga khona isidanga se-PhD esikwi-Intanethi?
Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship Scholarships epheleleyo I-PhD Scholarships Scholarship Postgraduate Uphando kunye noBambiswano Iingcebiso zescholarship Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo I-United States Scholarship UScholarships
iinkqubo zeFD ezixhaswa ngokupheleleyo
Post Previous:Ukufundiswa kweeMasters eYurophu 2022
Okulandelayo Post:Izikolo ezili-13 eziBalaseleyo zeZidingo zaseFlorida